Akusoloko kudingeke ukuba ukhethe i-mattress. Ininzi kuxhomekeke kulolu khetho, emva kwendawo yesithathu yobomi umntu alala embhedeni, kwaye kungcono, ukuba kukho ukulungele ukulala. Ngako oko, ngaphambi kokuba uthenge into ebalulekileyo njengemathebhu, kufuneka ulungiselele okufutshane. Kuyafaneleka ukuba umatshini axabise kakhulu kwaye athenge ityala lakhe. Uya kukhonza ixesha elide ukuba unomgangatho ophezulu. Emva kwayo yonke into, akuyivuyo iminyaka ukunyamezela into engeyithandiyo. Ukuthintela oku kungenzeki, kufuneka ufumane into encinci malunga neenzuzo kunye nokungahambi kakuhle kwamatitha, ziziphi iintlobo zamatitha ezikhoyo.
Kukho ezimbini iintlobo zamatitha, kwaye zihluke kwisakhiwo sabo. Uhlobo lo kuqala luyi-mateti. Ziza ngeendlela ezininzi. Kodwa yintoni edibanisa amathebhu enjalo, ngoko le yunithi enye ngaphandle kwemithombo. Ingenziwa kwizinto ezahlukeneyo ukusuka kwi-latex ukuya kwi-fiber. Wonke umntu unempawu zakhe kwaye siza kuthetha ngale nto ngokuhlukileyo.
Izibhanki ze-Ascona zenziwe nge-latex zenziwe kunye nokudibaniswa kweemveliso zamagciwane kunye nezongezo zokufakelwa, ngokusekelwe kwerubha yemvelo. Ziyadingeka ukwenzela ukwandisa ukuchasana nokutshatyalaliswa kunye nokuhlaselwa kwefungal. Nangona kukho iziqinisekiso ezivela kubavelisi, isabelo seerubhi yemvelo kuso sinqabile ngaphezu kwe-40%. Oku kuya kukwanela, kuba i-latex idibana nayo yonke imigangatho ye-clean and epidemiological. Ungesabi ukulala kule maktress, ungalala kulo, kulungile. Ukongezelela, i-latex ineempawu ezincedo ezivela kuzo zonke izakhiwo ezinobumba.
Ibhloko leemathile liqulethwe ngumbumba we-monolithic we-foam ye-rubber. Kuthatha kalula umlo owufunayo kwaye unomlinganiselo ophezulu. Kuxhomekeka kwisakhiwo sepolymer yeruba. Yaye i-softness ixhomekeke kwi-granules edibeneyo yomoya, ephoxiswayo kwaye icinezelwe phantsi kwesenzo somthwalo, ngelixa umlo ugcinwe. Izigidi zeetlule ezingabonakaliyo kweso iso liguqula umswakama xa lihlaselwa ngengozi. Ngaloo ndlela, i-mattress inokukhuselwa kumonakalo wefungus.
Iimitha eziseLatex zilukhuni kwaye zilula. Iqondo lokuqina lixhomekeke kwi-perforation, kwinani leeseli, ukuba zininzi zazo, i-mattress esuka kwi-latex iya kuba ithambileyo, ukuba iiseli zincinci, i-mattress iya kuba nzima. Iimitha zokugcina ezenziwe nge-latex zifanelekileyo ngakumbi kubantu abaneentlobo ezahlukeneyo zezifo ze-musculoskelet system kunye nabantu abadala. Kule magubane unokulala phantsi kwaye ucinga ukuba uyinkosikazi entendeni. Kodwa umgudu ufumana inkxaso efanelekileyo. Ezi mattress zenziwe kuphela nge-latex. Kodwa izibilini zamathambo ezinyukayo zinyuka zikwazi ukwenza ngaphandle kwempahla yendalo, ngaphandle kwehhashi, i-coir kunye nezingeniso. I-mattress enzima yeLatex iya kuba yinto efanelekileyo kubantu abanamatye, ingaba lula ukumelana nomthwalo ukusuka kwisisindo esikhulu.
Iimitha zamathambo ezenziwe nge-latex ezibonakalayo zibonakaliswa ukuxhatshazwa kwengcinezelo eqinile kunye nokunyaniseka okukhulu. I-Hypoallergenic, lo mbandela unama-mattress e-latex, liphupha lokuhamba. Enye inzuzo yintengo ephantsi xa kuthelekiswa ne-latex yemvelo. Kodwa ekuhambeni kwexesha, umthengi uyaqonda ukuba ixabiso lihambelana nemigangatho, kuba i-latex yokufakelwa yincinci, ilahlekelwe ukuxhatshazwa kwayo, iqala ukunyuka njalo njalo.
Iimitha zamathambo zineengxube ezininzi, kodwa nazo zinokungaphumeleli. Enye yezinto ezingalunganga yintengo. Iimitha zamathambo zineendleko zineendleko zamashumi amabini ama-ruble, kukho, kunjalo, ezo zibiza kakhulu. Kule mihla yamatrosi e-latex, umxholo weerubha wendalo uza kuba phantsi, kwaye umgangatho wabo unokubuzwa.
Ukwazi ukuba yeyiphi iindidi zamatitha e-latex ezikhoyo, unokukhetha phakathi kwexabiso eliphantsi lomatshini wokufakelwa kunye nokuqina kwe-latex yemvelo. Yenza ukhetho phakathi kokumelana noxinzelelo olunzima kunye nentuthuzelo yamatresi athambileyo. Oku kuya kunceda ukuveza abadayisi abazama ukunika umthamo we-latex owenziwe nge-latex yokufakelwa kwi-mattress eyenziwe nge-latex yemvelo.
Indlela yokulala kakuhle indoda kunye nomfazi?
Ingqalelo, inobungozi: Ezi zokutya eziyingozi esizithengayo imihla ngemihla
Ungathabatha njani umboleko ngaphandle kwediphozithi?
Ungakhetha njani umbala we feng shui?
Umsebenzi woNyaka omtsha kwi-kindergarten: umthi owenziwe ngeboya yekotoni, kwiklasi yeklasi
Amanconsi emntwaneni kwimpumlo
Intombazana ingasabela njani ngokuncoma ngokuchanekileyo?
Ixesha lokususa kwi-radish kunye nepilisi
IGenie ukusetyenziswa kwamanye
Uyazi kakuhle: umdlali womdlalo
Ukutya kwesiTaliyane, isidlo sangokuhlwa
Iibhokisi zekhononi kunye nekhadiyamom
Ukwesaba komtshakazi ngaphambi komtshato
Le ndlela yokwenza ilula yandinceda ukuba nditshintshe izici zobuso
Ufanele uqhube njani nendoda enomdla?
Iphupha elixabisekileyo: izinto ezintsha zeqoqo leTiffany T
Isonka esenziwe ngamanzi kunye namantongomane, i-basil kunye neeshizi zebhokhwe